Vao tonga eto Italie? - Malagasy eto Italia - malagasy.it
Eto ianao : fandraisana > Hamangy aty Italie? > Vao tonga eto Italie...
Vao tonga eto Italie?
Miarahaba anao tonga soa eto Italie aloha izany.
Mila mitandrina tsara fa na aty Italie aza dia betsaka ny mpanedaka sy mpanao sintomahery ka tazomy sy hefano tsara ny vola sy appareil photo, video sns. Indrindra eny @ manodidina station na gare ny train.
Raha mila information ianao dia tsara kokoa ny manontany ireny polisy na mpitondra bus na mpivarotra noho ny olona tsotra eny an-dalana.
Efa be ny voa ka mba hialana @ izany dia tsara raha mitandrina dieny voalohany.
ny zavatra tokony atao raha vao tonga eto Italie
Ny olona mampiantrano anao dia tokony hampilaza ny manam-pahefana miadidy ny faritra misy ny fonenana (“commissariato di zona” na “ vigili urbani” ho an’izay monina any ivelan’i Roma) ao anatin’ny 48 ora.. Ny taratasy mila fenoina sy aseho amin’izany no antsoina hoe COMMUNICAZIONE DI CESSIONE FABRICATO. Azo vidina eny amin’ny tranombarotra “Buffetti” izy io, ary mila fenoina an-tsakany sy an-davany ary aterina eny amin’ny manampahefana miandraikitra izany.
Ampiarahina amin’io : dikan’ny (photocopie) kara-panondron’izay mampiantrano na ny fahazoan-dàlana mipetraka eto Italie (permis de séjour) raha toa ka tsy italiana izy ; dikan’ny passipaoron’ny ampiantranoina. Azo atao ihany koa ny mandefa azy ireo amin’ny paositra, atao “recommandée”.
Ao anatin’ny 8 andro (andro fiasana) idirana eto Italie, dia tokony hanao ny fangatahana ny fahazoan-dàlana mipetraka (“Permesso di soggiorno) eto Italie.
- Izany dia atao eny amin’ny UFFICIO IMMIGRAZIONE della QUESTURA di ROMA, ao amin’ny adiresy via Teofilo Patini, (manapaka ny via Salvati), Tor Cervara- Tor Sapienza, raha toa ka “Tipo C” (90 andro raha be indrindra) ny fahazoan-dàlana miditra nomena anao, na raha avy amin’ny tany tsy afaka manome fahazoan-dàlana miditra ho mpizaha-tany.
- Ho an’ireo fahazahoan-dàlana hafa kosa (mihoatra ny 90 andro) dia eny amin’ny “Commissariato di Zona” akaiky indrindra no hanaovanao izany.
- Raha sanatria misy diso tsipelina ireo mombamomba anao voasoratra ao amin’io fahazoan-dàlana mipetraka io, dia ilaina ny handehananao eny amin’ny “Ufficio Immigrazione” eny Tor Cervara-Tor Sapienza sy mangataka fanitsiana izany ( na dia mbola notazonin’ny “Commissariato di Zona” aza izy io).
Rehefa eny am-pelatànanao ny fahazoan-dàlana mipetraka dia ilaina ny :
- miseho eny amin’ny “Ufficio delle Entrate” mangataka ny atao hoe “Codice Fiscale”
- miseho eny amin’ny “Municipio di appartenenza” mangataka fahazoa-monina (residenza), sy mangataka kara-panondro
- miseho eny amin’ny “ASL di zona” mangataka hisoratra anarana amin’ny Servizio Sanitaria Nazionale mba hahafahanao manana mpitsabo miadidy anao
Permis de séjour na Permesso di soggiorno
Inona no atao mba hahazoana ny “permesso di soggiorno” voalohany?
· Manao fangatahana any @ Questura generale eo @ ilay faritany misy anao, ao anatin’ny 8 andro nahatongavanao teto Italie
· Miaraka @ ireo taratasy rehetra nahazoana Visa
. mameno ny formulaire fanaovana demande
· Photocopie ny passport
· Sary tapaka 4, mitovy sy vao haingana
· Marca da bollo €16,00 (un contrassegno telematico)
· Fanamarinana ny toerana hipetrahana (azo atao ao anatin’ilay presa in carico na lettre de garantie ihany koa io).
. ny taratasy ilaina rehetra araka ny karazana permis de sejour ho alaina (asa, famille, fianarana, sns)
. fandohavana ny vidin'ny fanaovana izany permis de sejour izany izay an'elanelan'ny €80 à €200 araka ny karazany (amin'ny ora hanoratana izao janoary 2016)
Rehefa avy eo dia mahazo tapakila vonjimaika mandrapahavonona ilay permesso di soggiorno, misy koa anefa ireo izay mahazo iny andro iny ihany miankinana @ ilay toerana.
Ireo taratasy ilaina hahafahana mipetraka eto Italie ara-dàlana:
· Passport manankery
· Visa d’entrée, nidirana ara-dàlana t@ frontière (ohatra par avion Malpensa na Fiumicino, na par train avy any Frantsa.)
· Permesso di soggiorno na carta di soggiorno italiana na koa avy amin’ny firenena Eropeana (ireo taratasy ireo no manamarina fa ara-dalàna ny fipetrahana eto Italie)
Important: @ ankapobeany, na eo @ fidirana eto Italie na mandritry ny fipetrahana eto dia ilaina ny fahavonona hatrany @ zay mety ho fisavana ataon’ny polisy.
Ireto no fanontaniana mipetraka matetika:
· Inona no antony nahatonga anao taty: turiste, ?
· Inona no fomba hivelomanao: trano, asa, vola?
· Ampy ve ireo fanananao mandritra ny fotoana hijanonanao aty sy hodianao any @ firenenao?
Marihina fa tsy azo atao ny mandainga @ polisy na tsy manana papier aza ianao satria tsy maintsy hanao fanamarinana ry zareo. Tsara kokoa aza ny manoro azy ny trano sy miantso izay olona miantoka anao, na mpampiasa izany. Izany dia mba hilazana fa na tsy manana papier aza ianao dia tsy mangalatra na mirenireny fotsiny, fa misy trano. Araky ny ohabolan-drazantsika hoe ny heloka hibaboana hono mody rariny. Matetika izay hafahafa paozy no manaitra ny vahiny ka aoka re samy hihezaka ho matotra isika mba hampalaza tsara ny firenentsika aty an-tany lavitra aty, isika koa ange samy ambassadaoron’i Madagascar e!
Noho ireo antony ireo dia tsara ny mitondra hatrany ny permesso di soggiorno na carte di soggiorno.
Raha manana permesso di soggiorno ary mipetraka eto Italie mihintsy dia afaka maka résidence sy Carte d’identità italiana, ary koa codice fiscale
Carte d’identità italiana
Ny zavatra ialina @ izany dia:
sary tapaka 4
Ny C.F dia code alfanumerque ( lettre + numero) izay hahafahan’ny Ministère du Finance mahafantatra ny tsirairay, satria samy manana ny azy avy ny rehetra.
Izany dia atao any @ Ministero delle Finanze- Dipartimento delle entrate (Ufficio delle imposte dirette)
Ny zavatra ilaina @ izany dia Permesso di soggiorno sy passport manankery ary maimaim-poana izy io.
Ny ilana ny Codice fiscale:
· Hisoratana anarana any @ “Servizio sanitarie nazionale” (Santé): hahazoana mifidy médecin de famille.
· Hahafahana manao asa tena
· Hahafahana mitady asa ara-dàlana
· Hahafahana manao contrat maro toy ny trano, varotra…
· Hahafahana manokatra compte any @ Banque
Sy ny maro hafa koa
NB: Raha mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala manoratra aminay.
< Aiza moa Italie?
Mifandraisa aminay >
Voasokatra tao anatin'ny 0.0911 segondra